नेपाललले लाओससंग दिंउसो २ बजे भिड्ने ! नौलो इतिहास बनाउने मौका - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
नेपाललले लाओससंग दिंउसो २ बजे भिड्ने ! नौलो इतिहास बनाउने मौका
Posted by Anup Subedi | २७ कार्तिक २०७३, शनिबार ११:४७ |
२७ कात्तिक,काठमाडौं । मलेसियामा भइरहेको एएफसी सोलिडारिटी कप फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा शनिबार नेपालले लाओससँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । खेल मलेसियाको नेगेरी रङ्गशालामा नेपाली समयअनुसार दिउँसो सवा दुई बजे हुनेछ ।
नेपाल समूह एको विजेता तथा लाओस समूह बीको उपविजेताको रुपमा सेमिफाइनलमा पुगेका हुन् । समूह चरणमा टिमोर लिस्टेसँग गोलरहित बराबरी खेलेको नेपालले ब्रुनाइलाई ३–० ले हराएको थियो ।
समूह चरणमा तीन खेल खेलेको लाओसले दुई खेलमा जित तथा एक खेलमा हार बेहोरेको थियो । श्रीलंकालाई २–१ तथा मंगोलियालाई ३–० ले हराएको लाओस मकाउसँग ४–१ ले पराजित भएको थियो ।
नेपाललाई इतिहास बनाउने मौका
यो प्रतियोगिता नेपाललाई इतिहास बनाउने मौका हो । नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम एसियाली फुटबल महासंघ एएफसीको प्रतियोगितामा अहिलेसम्म फाइनलमा पुग्न सकेको छैन । लाओसलाई हराएर फाइनलमा स्थान बनाउन सके नेपाली फुटबलका लागि नयाँ सफलता हुनेछ ।
पछिल्लो पटक सन् २००६ मा बंगलादेशमा भएको एएफसी च्यालेन्ज कपमा नेपालले फाइनलमा पुग्ने राम्रो अवसर बनाएको थियो । तर त्यो प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा श्रीलंकासँग पराजित भएपछि नेपालको महादेशीय प्रतियोगिताको फाइनल पुग्ने सपना टुटेको थियो । तर अहिले अवसर जुटेको छ । लाओस र नेपालबिच पछिल्लो पटक गएको मेमा भेट भएको थियो । मैत्रिपूर्ण खेलमा १–१ को बराबरी भएको थियो ।
नेपालका मुख्य प्रशिक्षक ग्योटुकु कोजीले खेल जित्ने अवसर रहेको बताएका छन् । खेलाडी केही थाकेको भएपनि लाओससँगको खेलका लागि तयार रहेको र आफूहरुले जित चाहेको उनको भनाइृ छ । लाओसको टिम बलियो रहेको तर आफूहरुसँग जितको अवसर रहेको प्रशिक्षक कोजीले बताए ।
यस्तै लाओसका प्रशिक्षक भालाकोन फोम्फेक्डीले आफूहरु नेपालसँगको खेललाई लिएर गम्भीर रहेको र नेपालको खेलसँग परिचित रहेकाले त्यही अनुसार रणनीति बनाएको बताए । शनिबार नै हुने अर्को सेमिफाइनलमा मकाउ र ब्रुनाई खेल्ने छन् ।
मकाउ समूह बीे विजेता तथा ब्रुनाइ समूह एको उपविजेता रुपमा अन्तिम चारमा पुगेका हुन् । खेल मलेसियाको कुचिङस्थित सारावाक रङ्गशालामा नेपाली समय अनुसार बेलुका सवा पाँच बजे हुनेछ ।
Previousनेपाल तरुण दलको महाधिबेशन सरगर्मी बढ्यो ! यी हुन अध्यक्षको प्रत्यासीहरु
Nextविद्युतीय प्रणालीमार्फत महानगरमा सेवा दिइने ! नगरवासीको सम्पूर्ण जानकारी कम्युटरमा
२४ कार्तिक २०७४, शुक्रबार ०७:५४
२ मंसिर २०७४, शनिबार १४:२२
महिला साफ च्याम्पियनसिप खेल्न भारत गएको नेपाली टोली बुधबार स्वदेश फर्कदै
२० पुष २०७३, बुधबार ०९:३०
सात वर्षीय बालकको हँसिया प्रहार गरी वीभत्स हत्या गरी फरार भएकी महिला पक्राउ
२८ असार २०७३, मंगलवार ०८:३८